India wins series in Zimbabwe -
Sport India wins series in Zimbabwe
Indian players celebrate the wicket of Zimbabwean batsman Vusmusi Sibanda on the third day of their cricket match in Harare, Sunday, July 28, 2013. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean players celebrate the wicket of India's batsman Rohit Sharma, right, during their third one-day international cricket match, in Harare, Sunday, July 28, 2013. India is in Zimbabwe for a series of one-day cricket matches. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Indian cricketer Suresh Raina, right and Zimbabwean bowler Brian Vitori chat during their third one-day international cricket match, in Harare, Sunday, July 28, 2013. India is in Zimbabwe for a series of one-day cricket matches. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Indian batsmanVirati Kohli celebrates after his side beat Zimbabwe by 7 wickets, during their third one-day international cricket match, in Harare, Sunday, July 28, 2013. India is in Zimbabwe for a series of one-day cricket matches. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean batsman Brian Vitori reacts after been caught out, during the third one-day international cricket match against India, in Harare, Sunday, July 28, 2013. India is in Zimbabwe for a series of one-day cricket matches. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean batsman Sean Williams left, plays a shot as Indian wicketkeeper Dinesh Karthik looks on, during their third one-day international cricket match in Harare, Sunday, July 28, 2013. India is in Zimbabwe for a series of one-day cricket matches. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
India's wicket keeper Dinesh Karthik, left, and Ambati Rayudu are seen on the pitch during the third one-day international cricket match against Zimbabwe, in Harare, Sunday, July 28, 2013. India is in Zimbabwe for a series of one-day cricket matches. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean batsman Sean Williams, centre, plays a shot as Indian fielders Virat Kohli,right and Dinesh Karthik look on, on the third day of the cricket match against Zimbabwe in Harare,Sunday, July, 28, 2013. India is in Zimbabwe for a series of one day cricket games .(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Indian player Raina Suresh, center, attempts to run out Zimbabwean batsman Brendan Taylor on the third day of the cricket match against Zimbabwe in Harare, Sunday, July 28, 2013. India is in Zimbabwe for one day cricket games. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Indian bowler Jaidev Unadkat bowls on the third day of the cricket match against Zimbabwe in Harare, Sunday, July 28, 2013. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)